Zipper Zipper, Zipper Nylon, Zipper Zipper, Zipper Sliders
Zipper Metal, Zipper Nylon, Zipper Zip, Zippers Long Chain for Sale
MH Zippers na-ejikọta gị na anyị. Anyị na-eme ihe dị iche iche nke zippers dị ka nylon zipa, resin zipper, metal zipper na ọtụtụ puku sliders dị iche iche. Onu ogugu kwa afo kariri $ 10. Edere Zipper maka ndị ahịa 'reference.You nwekwara ike ịga na weebụsaịtị Zipper www.mh-zipper.com.
Commonsense maka Zipper
A: Usoro a na-ejikarị eme ihe maka ịmata ogo Zipper
Band: Nye maka ndị agha ahụ kwesịrị ọbụna na-enweghị ntụpọ na ịfụ, Na-agbanye aka, ọ na-adị nro. Ìgwè ahụ dị ka ikuku na ntụziaka na ihu na ihu.
Ụbụrụ: Ihe dị elu nke ezé kwesịrị ịdị mma. Mgbe ejiri ya, ọ na-akwụ ụgwọ na-enweghị mkpọtụ.
Ihe nkwado: Ihe nkwado kwesịrị ịga nke ọma na n'enweghị ihe ọ bụla, ejide ya kama ọ gaghị abịa.
Yoga: Akwụda ahụ na-adabere n'òtù ndị agha ahụ n'ebughị ụzọ gbajie. Nkewa nkewa nke ịhapụ unit na njigide nke Scaparating unit: Square Bolt nwere ike nakweere kpamkpam.
Kwụsị Kwụsị: Nkwụsị elu ga-ejikọta ya na ezé mbụ na metal zippers na wilon. Ma, ebe dị anya agaghị enwe ike ịnweta lmm ma kwesiri ịdị ike ma hụ mma.
Nkwụsị nke njedebe: Nkwụsị ala ga-ejikọta ezé ma ọ bụ jikọta n'elu ala ma kwesiri ịdị ike ma lee mma.
B: Atụmatụ maka ịhọrọ Zipper
Ụda dị iche iche na-adabere n'ọnọdụ dịgasị iche iche, ya mere, mgbe ị zụrụ ihe ndị na-esonụ, a ga-agwa ndị na-emeputa ihe:
1. Ebee ka a ga - eji zipa (dị ka ịkwanye akpa ya, akpụkpọ ụkwụ, jackit, raincoat, tent, jeans chọrọ ịsacha akpụkpọ na ngwaahịa akpụkpọ anụ na nnukwu acidity) ma ọ bụ ihe ndị ọzọ pụrụ iche pụrụ iche.
2. ihe achọrọ maka ọdịnaya ma ọ bụ mkpọchi: adịghị mkpa inwe AZO ma ọ bụ nickel ma nyefee onye nchoputa anọrọ.
C: Ogologo ndidi nke Zipper n'ogologo
N'ihi ihe nkedo a na-eme site na ngwa ngwa nke igwe na-arụ ọrụ n'oge a na-emepụta nkedo dị ka ezé zuru ezé, enwere ike ịnagide ya.
Ogologo mkpọchi ahụ bụ ibu ka a ga-enye.
Njehie nke MH zipper Njehie ndị ụlọ ọrụ Japan nyere na New Century Fair
size Nkọwapụta (mm)
Isi ebe. ndidi
Zipper Ogologo (cm) Ogologo Ndidi
n'okpuru 30 ± 5mm
30-n'okpuru60 ± 10mm
60-n'okpuru100 ± 15mm
n'elu100 ± 3%
Zipper mechiri emechi
(Na-abụghị nkewa) Zipper mepere emepe
(Nwepu) Ọnwụ Ọgwụgwụ Abụọ
Zipper (nkewa) Ụzọ Abụọ Dị Nso
Zipper O Ntụkọta Ụzọ Abụọ Dị Nso
Ụzọ nke Zipper nha
nhazi ọkwa akụkụ
A = Ụdị ọkọlọtọ ogologo nke zipa
A1 = Isi isi teepu
A2 = Azụ isi teepu
Zipper mechiri emechi Site na njedebe elu nke ihe mmịfe ahụ gaa na
ọnụ nke nkwụsị ala.
Zipper mepere emepe Site na njedebe elu nke ihe mmịfe ahụ gaa na
ọnụ nke oghere.
Oghere Zipper Ọgwụgwụ Abụọ Site na njedebe elu nke ihe mmịfe ahụ gaa na
ọnụ nke njedebe nke njedebe nke
Zipper na Ihe Ntugharị Ugboro abụọ
(Ekekọrịtara na Isi-Njikọ) Site na njedebe elu nke ihe mmịfe ahụ gaa na
nkwụsị nke nkwụsị nke nkwụsị ala ọzọ.
(Haziri na Ala-na-
Njikọ nke ala) Site na njedebe elu nke ihe mmịfe ahụ gaa na
Ndị na-eji Zilon
Ndị na-eji ígwè zụọ
Ndị na-edozi plastic
Ndị na-edezi Zip
Zippers Home Categories --Na-atụgharị --Zippers --Ribbon & Tape --Ụzọ --Laces --Buttons --Interlining --Tassel & Fringe / Trimming --Tailoring Ngwa --Garments & Ngwa --Nweghari Machine & Akụkụ --Fabric --Onye ozo gbasara Anyị --MH Isi --MH Industrial --- Ihe ndị na-arụ ọrụ --- Ribbon & Tepe Factories --- Ụlọ ọrụ dị iche iche --MH History --Trade Na-egosi - Oghere Image - Album vidio Kpọtụrụ Anyị --Odi ebe --Feedback Community --Sonyere anyị